uhambo European: Kutheni Abakhenkethi Thatha oololiwe Not moya | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > uhambo European: Kutheni Abakhenkethi Thatha oololiwe Not moya
uhambo European: Kutheni Abakhenkethi Thatha oololiwe Not moya
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/04/2020)
Yiyiphi indlela engcono yokusebenzisa kwehlobo lakho ngaphezu ihambe Europe, kunene? Kunene. Akuyomfuneko ukuba ndimaphule ebhankini ukubona ezinye zeengqukuva Europe langa; yikholwe okanye hayi, kodwa enye iinkalo ezibalulekileyo yaseYurophu uhambo lwakho iindleko-olusebenzayo kukukhetha oololiwe endaweni moya izindawo zakho.
Apha zi 5 izizathu zokuba akhethe koololiwe endaweni moya kuya kukunceda ubone eYurophu hi ndlela leyinene ngopfu.
Yenza yokucinga ngeke akucele ukuba London-Paris oololiwe Eurostar kunye France TGV ke iindlela zikaloliwe kuphela-high speed eYurophu - kuba eminyaka embalwa edlulileyo, abafana baye ukuphuhlisa iindlela-high speed kulo lonke izwekazi, igalelo bendyebo zikaloliwe lokhenketho kunye nokwenza ukuba oololiwe endaweni moya ukufumana zikuye njengoko primary ukhetho ojikelezayo. Kwi-avareji, -High speed oololiwe kundwendwelo eYurophu 125 ukuba 200 mph, ngokuxhomekeke umzila kaloliwe izitishi apha ziyathungelana fabulously.
Trains Endaweni ziinqwelo-moya njengoko Option Faster
Abangela ukuba ngokukhawuleza kokundiza, ingakumbi hambo ngaphezu malunga 600 miles. Kanjani? Xa babale ixesha olichitha yokuqhuba ukuya kwisikhululo, ngoko siya khona ekuqaleni (yaye ngokufuthi bachithe phezu 2 iiyure ngaphambi kwendiza yakho), kwaye iitsheki zokhuseleko kwakunge-, ufumanise ukuba kulula ukuqhuba kwisikhululo sikaloliwe umbindi wesixeko kunye nebhodi 5 imizuzu phambi kokuba uloliwe ushiya isikhululo.
Amsterdam Lille Uqeqesha
Wena Hlawula Ngaphantsi Kuba Top-inotshi uleleyo Service Ngaphezu First-Class Plane iTikiti
Nokuba xa uhamba phezu oololiwe kunazo, ufumana ezinjalo ngentengo. Uya uyazibuza ukuba kutheni kengoku ndandisoloko ndingafuni umdla Uloliwe phambi! Njengokuba, uya kuhlawula ngeenxa £ 880 umntu ngamnye usuku ezimbini / olunye uhambo ubusuku kunye yaseJapan Iinkwenkwezi ezisixhenxe, kwaye sibe lo mhlaba uhlaza wesiqithi kumazantsi Japanese of Kyushu njengokuba uhamba; ezichasene ixabiso, itikiti moya evela London eTokyo liya kukudla phantse £ 5,000 kunye Airways British. Woah! Senza sibe imvakalelo uya kuba ngokukhetha oololiwe endaweni moya ukususela ngoku, yini wena?
ILyon ukuya eGeneva amaxesha oLoliwe
Bern eGeneva Uqeqesha
Impahla elahlekileyo (phantse) Unheard Of when comparing Trains Instead of Planes
imithwalo Lost into into esele, ubuncinane xa kuziwa -Elide kude moya esijikelezayo. Ezichasene, kwizikhululo zikaloliwe kunye noololiwe ungalahli abakhweli iingxowa njengoko wedwa abo banexhala malunga imithwalo yabo abakhweli. Unako kwakhona ukuzisa kangangoko zinako ukukhongozela, ngokungafaniyo moya banikelwe ukulinganiselwa imithwalo.
Oku mhlawumbi isizathu ilungileyo ukusebenzisa oololiwe endaweni moya.
Salzburg ku Berlin Uqeqesha
Unako Tsiba Kwisihogo ka Airport Security
Xa kuziwa ukhuseleko, ngokukhetha oololiwe endaweni moya kubonakala ngathi pha, kwaye ngoku isizathu sokuba. Amava yokhuseleko moya Ngokusisiseko le uthotho iimeko ezingentle. Wena uqala ebila ngokukhawuleza phambi kokuba singene itshekhi yokhuseleko nangona uyazi wena ukuba wenze okanye bazisa into mthethweni kunye nawe. and, masenze ukulibala izicelo ezingemnandi ukususa ibhanti lakho, akhulule iimbadada zakho kunye whatnot, size patted phantsi indoda isigantsontso. Oololiwe azinayo le - kwaye ezitywine yavele ibitheni.
amehlo kuyo Gcina-A-Train babhukishe ukukhwela uloliwe oya kuyo ozithandayo, kwaye amazinga zibiza! Ungayilibali yonke imirhumo ukubhukisha kwaye amkele inkqubo ukubhukisha imizuzu-3 ezilula online.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-trip-trains-planes%2F%0A%3Flang%3Dxh- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#indiza #railtravel inqwelo-moya planetravel kaloliwe train Travel
Indlela Online Train Ticket Ukubhukisha Ngayo Yakho Travel kungabi-Free